पहिलो भेटमै विराटसँग रिसाएकी थिइन् अनुष्का, यस्तो थियो कारण – Khabar Silo
एजेन्सी। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली र अभिनेत्री अनुष्का शर्माको जोडी संसारभरका सुन्दर जोडीमध्ये गनिन्छ । यी दुईको पहिलो भेट एउटा विज्ञापनको शुटिङका क्रममा भएको थियो । यही भेटपछि उनीहरु साथी बने । सम्बन्धले विस्तारै प्रेमको रुप लियो र दुईले विवाह गरे । यी दुईको पहिलो भेटको विषयमा अहिले एउटा रोचक खुलासा भएको छ ।
विराटले एक टिभी शोमा आफू अनुष्कासँग पहिलोपटक भेट्दा निकै नर्भस भएको खुलासा गरेका छन् । यही कारण विराटले अनुष्कासँग पहिलो भेटमै गलत कुरा बोलेका थिए । विराटले भने ‘म धेरै नर्भस थिएँ । मलाई थाहा थिएन कि के गर्नुपर्छ । आफ्नो डर लुकाउनको लागि मैले एउटा जोक सुनाएँ ।’ अनुष्कासँग पहिलो भेटको बारेमा कुरा गर्दै कोहलीले भने ‘मैले जे भनें शायत त्यो सही थिएन ।’
विराटका अनुसार त्यतिबेला अनुष्का हाइ हील लगाएर सेटमा आएकी थिइन् । हीलका कारण अनुष्का विराटभन्दा अग्ली देखिएकी थिइन् । यो देखेपछि विराटले भनेका थिए – तपाइँले यो भन्दा अग्लो हील पाउनुभएन ? विराटको मुखबाट यो कुरा सुनेर अनुष्का रिसाएकी थिइन् । त्यसपछि कोहलीले कुरा सम्हाल्दै आफूले केवल मजाक गरेको बताएका थिए । विराटले मान्छन् कि अनुष्का अगाडि आएपछि उनको पूरै जीवन नै बदलियो ।
लैंगिक समानतामा जोड दिँदै आएका बलिउड नायक अमिताभ बच्चनले केही समयअघि मृत्यु पश्चात आफ्नो सम्पति छोरा अभिषेक र छोरी श्वेतालाई समान रुपले बाँड्ने घोषणा गरेका थिए। ३८ वर्षदेखि बलिउडमा सक्रिय अमिताभ बच्चनको कुल सम्पति कति छ ? यद्यपी, बिग बीको कुल सम्पतिको कुनै सत्य जानकारी भने छैन, किनकि उनको सम्पतिलाई लिएर रिपोर्टहरुमा भिन्नता देखिने गरेको […]
Posted on April 4, 2021 April 4, 2021 Author khabar silo
तनहुकि चौबिस बर्षिय तारा गुरुङ ।कल्कलाउदो उमेरलाई लालि पोतेर रङ्गाउने उनको यो उमेरमा उनी कुरुप भित्ताहरुलाई रङ्गिन बनाउननै ब्यस्त छिन् ।उनले अहिलेसम्म सयौ घरहरुलाई रङ्गिन बनाएर सजाइसकेकि छिन् । ताराले पेन्टिङ काम गर्न थालेको पनि चार बर्ष बितिसकेको छ ।पेन्टिङ काम ताराले काठमाडौंमा सिकिन र यसलाई व्यवसायिक रुपमा भने चितवनमा उनले सुचारु गरिन् ।अहिले तारा […]